Aquaveture Waterpark Dubai Tour ngwugwu
Atlantis pụrụ icheeze 212022-05-23T17:14:51+05:30
01 abalị nọrọ na Atlantis The Palm (05 Star) gụnyere nri ụtụtụ na nri abalị.
Interhotel na-ebufe site na Dubai Hotel gaa Atlanti The Palm na ndabere nkeonwe.
Nweta nnabata na Atlantis Aquaventure Waterpark na The Lost Chambers Aquarium ka ịnọ na Atlantis The Palm.
Ọdụ ụgbọ elu ọpụpụ na-ebufe site na Atlanti The Palm gaa ọdụ ụgbọ elu International Dubai na ndabere nkeonwe.
Lelee ụlọ oriri na ọṅụṅụ Dubai ma nyefee na Atlantis, The Palm. Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-erute na họtel n'oge maka ịnyefe interhotel. Otu n'ime ebe Dubai kacha eleta, ọ bụghị ihe ijuanya na ebe kpakpando ise nke Palm Island na-egosi na ọtụtụ akwụkwọ ozi, foto onwe ezumike na posts Instagram. Ị nwere ike ịtụ anya ntụrụndụ na-adịghị agwụ agwụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ụwa, ahụmahụ aquarium pụrụ iche na ihe osise pụtara ìhè na ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko a ma ama n'ụwa.
Ụdị ime ụlọ: Ụlọ Deluxe / Imperial Club King Room price
Ịkekọrịta Otu $ 1,210
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 689
Agba okenye ọzọ $ 511
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ $ 235
Nkata ụmụaka na akwa ọzọ $ 305
Aha ụlọ nkwari akụ: Atlantis Nkwụ
Typedị :lọ: Imperial Club King Room